Scribble 🥇 Pinda uye Nakidzwa kubva Emulator.online
nyora . Kuvandudza mazwi mune chero mutauro ibasa rinoda kuzvipira. Ko kana, kuti ubatsire neiri basa rakaoma, iwe unogona kutarisira kurudziro yemufaro uye mutambo wepamusoro wemakwikwi? Iri reSribble, izwi reAmerica mutambo, rakagadzirwa muna 1930 uye kubvira ipapo rakashandurwa mumitauro makumi maviri nemaviri.
Scribble: sei kutamba nhanho nhanho?
Kutamba backgammon online mahara, chete tevera iyi nhanho-nhanho mirairo :
Step 1 . Vhura browser yako yaunofarira uye enda kune webhusaiti yemutambo emash.online.
Step 2 . Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Iwe unofanirwa kusarudza zita kuti utange kutamba. Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kusarudza mufananidzo. Dzvanya " Tamba " uye iwe unogona kutanga kutamba, sarudza kutamba uchipesana nemuchina kana tamba uchipesana neimwe kana shamwari dzakawanda.
Step 3. Heano mamwe mabhatani anobatsira. Unogona " Wedzera kana bvisa ruzha ", tinya" tamba "bhatani uye tanga kutamba, unogona" Pause "Uye" Dzorerazve "chero nguva.
Step 4. Kuti ukunde mutambo unofanirwa kugadzira mazwi pabhodhi. Tsamba imwe neimwe ine mamakisi . Chero ani anowana mapoinzi akawanda pakupera kwemutambo achakunda.
Step 5. Mushure mekupedza mutambo, tinya "Tangazve" kutanga patsva.
Chii chinonzi Scribble?
Scribble mutambo webhodhi umo vatambi vayo (2-4) vanoedza kuwedzera mapoinzi nekugadzira mazwi akabatana , uchishandisa mabwe etsamba pabhodhi rakakamurwa kuita 225 mativi .
Vanhu vazhinji vanotenda kuti ivo vakagadzira Scribble ndivo James brunot uye Helen Brunot , asi pachokwadi yakanga isiri iyo pfungwa yavo, pane izvozvo muvambi weSribble ndiAlfred Butts , mugadziri kubva kuPoughkeepsie, muHurumende yeNew York.
Gore raive 1931 , uye kufanana nevazhinji vachangobva kushaya mabasa, Butts aive nenguva yakawanda yekurega. Akafunga kuuya nemutambo mutsva waitsamira parombo uye pamwe nehunyanzvi.
Alfred Mosher Butts, akaverenga mapeji epamberi ebepanhau reNew York Times kuti aone kuti tsamba dzakapihwa kangani mumutauro weChirungu (asi akaderedza zvinoitika zve "S" kuitira kuti mutambo usanyanya kuve nyore), uye yakapa kukosha kune yega yega zvichienderana nekushomeka kwayo.
Hapana bhodhi raidikanwa nekuti mataira akarongedzwa zvinoenderana nechirongwa chemuchinjiko. Akapa mutambo uyu zita Lexicon .
Chikumbiro chake chepamutemo hachina kutambirwa, uye ivo vaigadzira mutambo havana kufarira, saka muna 1938, akagadzirisa mutambo nekuwedzera a 15 x 15 bhodhi iine zvikwiriso zvakakwirira uye a nomwe-mataira lectern (maficha achiripo). .
Akachinjawo zita kuti rive Criss-Muchinjikwa , asi zvakare iyo Patent Hofisi uye vagadziri vemitambo havana kuda kuziva chero chinhu. Mushure mekupedza mashoma, akadzokera kubasa rake rekare rekugadzira.
Muna 1948, James Brunot , muridzi weimwe yemitambo mishoma, akati akagadzirira kuyedza kuitengesa zvinobudirira. Mukutsinhana nekodzero, Brunot akawana kodzero dzepamutemo .
Ndakagovera zvakare zvikwereti zvikwereti, ndakarerutsa mitemo, uye akachinja zita rave nyora , izvo yakashambadzirwa gore rimwe chete 1948 uye kuGreat Britain muna 1953 .
Achishanda kubva kumba, akatengesa anopfuura zviuru zviviri zvemitambo muna 2,000. Muna 1949 izwi rakabuda uye kutengesa kwakatanga kukwira, Brunot paakange ave kuda kukanda tauro.
Jack Strauss, maneja pane dhipatimendi reMacy, akatamba pazororo. Paakadzoka akakumbira dhipatimendi rake remitambo kuti vamutumire mimwe yacho, asi pakanga pasina stock.
Macy akatanga kutsigira kukurudzira, uye nekuti Brunot aisakwanisa kuenderera nekutengesa kwakawedzera, yakapa marezinesi kugadzirwa Selchow & Righter . Kodzero kunze kweUnited States, Canada neAustralia dzakatengeswa kuJW Spears, kambani yeBritain. Chekutanga kushandiswa kweBritish patent kwakaitwa chete muna 1954.
Shanduro dzakasiyana dzinodiwa pamitauro yakasiyana sezvo kuwanda kwemavara uye kunyangwe iwo mavara anogona kusiyana (semuenzaniso, Spanish ine mavara LL uye CH). Inopfuura mamirioni zana emitambo yakatengeswa mumitauro makumi maviri nemapfumbamwe. James Brunot akafa muna 100 uye Alfred Butts muna 29.
Mitemo yacho ichagara ichitsamira pane waunotamba naye uye anenge asingatombonyatsomanikidzirwa.
nyora inogona kutambwa nenhamba pakati pevatambi vaviri kusvika vana .
Iko kune bhodhi rekwere rine gumi nemashanu mativi padivi.
Mumwe nemumwe achave nekodzero yemavara manomwe kutenderera imwe neimwe.
Mutambo unotanga kana iwe ukatora tsamba iri padyo neA kana A.
Tsamba imwe neimwe ine nhamba ine kukosha kwakaringana.
Bhodhi rine makwere anowedzera kukosha kwemavara kana mazwi, kana tsamba kana izwi richidarika kukosha kwacho. Aya maitiro anogona kupetwa kaviri kana katatu.
Kana mutambi achigona kugadzira izwi achishandisa mavara manomwe ari muruoko rwake, iye otomatiki anowana makumi mashanu emapoinzi .
MuScribble, hazvisi zvekuvaka mazwi chete, zano ndere kuunganidza mapoinzi netsamba dzakanaka nenzvimbo dzakanaka.
Mushure mekufamba kwekutanga, vatambi vanofanirwa kushandisa kanenge tsamba imwe iyo yatove mubhodhi remutambo.
Mutambo unopera kana tsamba dzemitambo dzapera uye vatambi vese vaita kufamba kwavo kwekupedzisira. Iwo mapoinzi anogara mutambi mumwe ari muruoko akabviswa kubva pauwandu hwavo.
• Dai zvidimbu zvese zveSribble zvakagadzirwa kusvika zvino zvakaiswa padivi nepadivi, zvaizogoneka kuita tambo inoenderera inokwanisa kutenderera Pasi kasere.
• Mauto maviri akavharirwa muchikoko muAntarctica muna 1985. Vakaridza Scribble vachienderera kwemazuva mashanu, kudzamara vaponeswa.
• Statistics dzinoti makumi matatu emitambo Scribble mitambo inotangwa awa yega inopfuura.
• Mutauro wekupedzisira wakaburitswa Scrabbrle ndiWales, iyo vhezheni yakaunzwa muna 2006.
• Inofungidzirwa kuti kune dzinosvika miriyoni imwe dzakarasika zvidimbu zvemutambo zvakapararira pasirese.
• Muna 1993, duramazwi rinonzi Scribble Dictionary rekuNorth America rakarambidza kumhura kwese nekutuka kwemarudzi.